TPLF waa in lagula xisaabtamaa tacaddiyada ay ka gaysteen gobolka Amhara
Dowladda Mareykanka waxay si aad ah uga walaacsan tahay xadgudubyada lasoo wariyay ee ay ka mid yihiin kufsiga iyo rabshadaha oo ay dagaalyahannada xiriirka la leh Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray ka geysteen gobolka Amhara ee dalka Itoobiya, sida ku cad warbixin ay dhawaan soo saartay hey’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International.
Xadgudbyada ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalooyinka Chenna iyo Kobo dhamaadki bishi August iyo horraantii bishi September ee sannadki 2021, waxyar kaddib marki ay xooggaga Tigray-da la wareegeen aaggaasi bishii July.
“Tani waxaa ku jiray dhacdooyin soo laa-laabtay oo ahaa kufsi baahsan, boob iyo dilal kooban oo loo geystay meelo ay ka mid yihiin isbitaallo.” Sidaa waxaa tiri Sarah Jackson, oo ah Agaasime ku xigeenka Bariga Africa, Geeska iyo Harooyinka Saree e Hey’adda Amnesty International.
Degmada Kobo, oo ku taalla dhinaca waqooyibari ee gobolka Amxaarada, dagaalyahannada Tigray-da ayaa si ula kac ah ugu laayay dad rayid ah oo aanan hubeysneen.
Laga soo billaabo bishii July 2021, jidaha, gudaha iyo hareeraha degmada Chenna, iyo tuulo kale oo ku taalla gudaha gobolla Amxaarada ayay xooggaga Tigrayda ku xoogeen tobnaan dumar iyo gabdho isugu jiray. Amnesty International ayaa ku warrantay in “tacaddiyada galmada ay wehliyeen falal wuxushnimo oo naxdin leh oo heerkoodu aad u sarreeyo oo ay ku jiraan jir-dil, hanjabaadyo dil iuo magac-dilid qowmiyadeed.” Qaar badan oo ka mid ah dhibbanayaasha badbaaday ayaa loo geystay dhaawacyo isugu jira mid jireed iyo mid maskaxeed.
Amnesty International waxay horay u diiwaangeliysay dhacdooyin kuwaan la mid ah, oo ah kufsi ay dagaalyahannada Tigrayda u geysteen dumar iyo gabdho ku nool deegaanka Nifas Mewcha ee dhulka Amxaarada. Waxay kaloo heshay. Waxay kaloo heshay warar lagu kalsoonaan karo oo sheegaya kufsi ka dhacay deegaanno kale oo ka mid ah gobolka Amxaarada.
Nawaaxiga deegaannada Kobo iyo Chenna, dadka deegaanka ayaa u sheegay Amnesty International in dagaalyahannada Tigray ay dhac iyo bililaqo u geysteen gurayhooda iyo dukaamadooda isla markaana ay burburiyeen hanti dadweyne oo ay ku jiraan xarumo caafimaad iyo iskuullo. Boobka iyo bililiqada loo geystay xarumaha caafimaadka ayaa wax aanan macquul aheyn ka dhigtay in dumarka iyo gabdhaha la kufsaday, iyo dadka kale ee deegaanka ay helaan daryeel caafimaad.
Warbixinnada sii socda ee quseeya gabood-fallada ayaa hoosta ka xarriiqaya sida deg deg ah ee loogu baahanyahay in lagu soo afjaro colaadda milltari ee hadda socota, ayuu yiri afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka Ned Price. “Waxaan sii wadnaa inaan isku xirno dhinacyada si aan ugu boorinno in la joojiyo colaadda lana soo gaba gabeeyo gaboodfalka, aanan la xannibin kaalmooyinka bani’aadannimo ee naf-badbaadinta ah isla markaana nabad laga gaaro colaadda.”
“Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan dhinacyada hubeysan in ay ka tanaazulaan isla markaana dhameeyaan xadgudubyada ka dhanka ah bani’aadannimada iyo qalalaasaha ka dhanka ah rayidka,” ayuu yiri afhayeen Price. “Wali mowqif adag ayaan ka taagannahay in ay jiri doonaan baaritaan lagu kalsoonyahay iyo in isla-xisaabtan ku saabsan gabood-fallada taas oo qeyb ka ah xal kasta oo waara oo laga gaaro colaadda.” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay afhayeenka.